प्रदेश २ का अस्पताललाई सरकारले दियो ७ वटा भेन्टिलेटर, कुन अस्प्तालले कति पाए ? · JanakpurPress
प्रदेश २ का अस्पताललाई सरकारले दियो ७ वटा भेन्टिलेटर, कुन अस्प्तालले कति पाए ?
२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार ०९:३८ गते
जनकपुरधाम : मित्रराष्ट्र तथा दातृनिकायले सहयोग गरेको सात वटा भेन्टिलेटर सरकारले प्रदेश २ लाई दिएको छ ।
कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार गरिरहेका ३४ वटा अस्पतालका लागि ९५ वटा भेन्टिलेटर वितरण गरिएकोमध्ये प्रदेश २ का दुई अस्प्ताललाई ७ वटा वितरण गरिएको हो ।
वीरगञ्जको नारायणी अस्पताललाई ५ र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई २ थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डा. भीम सिंह तिंकरीले जानकारी दिए ।
आवश्यकताको मूल्यांकन गरेर सहयोगमा उपलब्ध भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिण्डर तथा एन्टिजेन किट विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा पठाएको उनले बताए ।
देशभरका अति आवश्यकीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामाका लागि ९७० थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, ५२१४ थान खाली अक्सिजन सिलिण्डर, ३२९ थान भरी सिलिण्डर र १६ लाख १९ हजार ७२५ थान एन्टिजेन किट समते पठाइएको छ । उनका अनुसार वीर अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले ११/११ वटा भेन्टिलेटर पाएको छ ।
त्यसैगरि बाँकेको भेरी अस्पताल र काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई ५/५ थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) अस्पताल र धुलिखेल अस्पताललाई ४/४ वटा भेन्टिलेटर प्रदान गरिएको छ ।
पर्सामा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्न सिफारिस, के गर्न पाइने / नपाइने ?
रुसमा जहाज दुर्घटनामा ९ जनाको ज्यान गयो
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक मिस्त्रीको ज्यान गयो
उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने मेरो मूल उद्देश्य हो : मन्त्री यादव
प्रदेश २ : कारखानामा आगलागी हुँदा दुई मजदुरको ज्यान गयो, तीन जना घाइते
प्रदेश २ सहित देशभर आज र भोलि भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन आग्रह